Hetsi-panoherana Makedoniana Manoloana Ny Fanesorana Hazo Ao Skopje · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Aogositra 2013 18:21 GMT
Ao amin'ny lahatsoratry ny Libertas mitondra ny lohateny hoe “Mikasika ny Fandripahana ao Bristol” ny fanavazavana ny antsipirihany tamin'izany maraina voatonona izany, sy ny fanamarihana manokana ny tsy fanarahan-dalàna sasantsasany tamin'ilay fihetsika. Nandahatra lisitra ny mpanoratra Nicholas Naumoski:
Ny ampitso, izany hoe ny alahady, niditra tao amin'ny tambajotra sosialy ny mpiserasera hanomana ny fihetsiketsehana manaraka ao Bristol ary nitatitra [mk] ny hivorian'ny mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny toerana.
Na dia vitsy kokoa noho ny nantenaina aza ny tonga tamin'ilay fihetsiketseha-panoherana, maro ny Makedoniana no nampitaha tao amin'ny tambajotra sosialy azy ity amin'ny kianjan'i Taksim na ny zaridainan'i Gezi. Nanoratra ny mpisera Twitter Gotze :
Lavitra an'i Taksim i#Bristol , sy isika raha oharina amin'ny mpanao fihetsiketsehana tiorka… Tamin'ny andro tokony hahazoana valiny maro indrindra dia olona zara raha nahatratra 250-300 no niseho…
Nahazo olona 300 eo ho eo ny hetsi-panoherana, raha nalefa hijoro manodidina ny toerana indray ny polisy. Namoaka raki-tsary [mk] ahitana ny barazy sy ny hetsi-panoherana tamin'ny alahady ny habaka Macedonian Plus Info, raha ny sary sy lahatsarin'ny [mk] fanombohan'ny fanapahana hazo tamin'ny efatra maraina, izay hafahafa ihany fa nandritra ny alin'ny Asabotsy hifoha Alahady, ny Libertas, ka nilaza ilay asa alina ho “katahotra”. Nanamarika ny mpisera tambajotra sosialy sasantasany fa tena nilamina tokoa ny hetsika, ary vitsy ny polisy teo amin'ny toerana nanaovana fihetsikesehana ary nanara-morona [mk] ny ankamaroan'ny polisy tamin'ny ankapobeny.